“Ane Mwoyo Wakangwara”—Jehovha Mwari Anozvininipisa uye Anonzwisisa | Swedera Pedyo
“Ane Mwoyo Wakangwara”​—Asi Anozvininipisa
1-3. Nei tichigona kuva nechokwadi chokuti Jehovha anozvininipisa?
BABA vanoda kudzidzisa mwana wavo muduku chidzidzo chinokosha. Vanoda chaizvo kuti zvipinde mumwoyo. Vanofanira kuzviita sei? Vanofanira kumira vachivhundutsira mwana nemashoko ehasha here? Kana kuti vanofanira kukotama kuti vaenzane nomwana votaura nenzira younyoro inofadza? Chokwadi baba vakachenjera, vanozvininipisa vaizosarudza nzira younyoro.
2 Jehovha ndiBaba vorudzii—vanozvikudza kana kuti vanozvininipisa, vane hasha kana kuti vanyoro? Jehovha anoziva zvose, ane uchenjeri hwose. Zvisinei, wakacherechedza here kuti kana vanhu vane zivo noungwaru hazvirevi hazvo kuti vanozvininipisa? Sokutaura kunoita Bhaibheri, “zivo inotutumadzisa.” (1 VaKorinde 3:19; 8:1) Asi Jehovha uyo “ane mwoyo wakangwara,” anozvininipisawo. (Jobho 9:4) Hazvirevi kuti ane chinzvimbo chakaderera kana kuti haana mbiri, asi kuti haazvikudzi. Nei zvakadaro?
3 Jehovha mutsvene. Naizvozvo kuzvikudza, unhu hunosvibisa, hakusi maari. (Mako 7:20-22) Uyezve, cherechedza izvo muprofita Jeremia akataura kuna Jehovha achiti: “Chokwadi muchayeuka [Jehovha pachake], mokotamira pamusoro pangu.” * (Mariro aJeremia 3:20, NW) Fungidzira! Jehovha, Changamire Ishe wezvisikwa zvose, akanga achida ku“kotama,” kana kuti kuenzana naJeremia, kuitira kuti arangarire munhu asina kukwana iyeye nenyasha. (Pisarema 113:7) Hungu, Jehovha anozvininipisa. Asi kuzvininipisa kwaMwari kunosanganisirei? Kunowirirana sei nouchenjeri? Uye nei kuchikosha kwatiri?
Nzira Iyo Jehovha Anoratidza Nayo Kuzvininipisa
4, 5. (a) Kuzvininipisa chii, kunoratidzwa sei, uye nei kusingambofaniri kuonekwa sokusava nesimba kana kuti kutya? (b) Jehovha akaratidza sei kuzvininipisa mukubata kwake naDhavhidhi, uye kuzvininipisa kwaJehovha kunokosha zvakadini kwatiri?
4 Kuzvininipisa ipfungwa dzinozvidukupisa, kusavapo kwokuzvikudza norudado. Kuzvininipisa, unhu hwomukati hwomwoyo hunoratidzwa nounhu hwakadai sounyoro, kushivirira, uye kunzwisisa. (VaGaratiya 5:22, 23) Zvisinei, unhu hunofadza Mwari uhwu hahufaniri kumboonekwa sokusava nesimba kana kuti kutya. Hahupesani nehasha dzaJehovha dzakarurama kana kuti kushandisa kwake simba rokuparadza. Asi, nokuzvininipisa kwake nounyoro, Jehovha anoratidza simba rake guru, simba rake rokuzvidzora zvakakwana. (Isaya 42:14) Kuzvininipisa kunowirirana sei nouchenjeri? Rimwe bhuku rinotsinhira Bhaibheri rinoti: “Kuzvininipisa kunorondedzerwa pakupedzisira . . . kuchinzi kusazvida uye ndiwo mudzi unokosha wouchenjeri hwose.” Saka, uchenjeri hwechokwadi hahugoni kuvapo pasina kuzvininipisa. Kuzvininipisa kwaJehovha kunotibatsira sei?
Baba vakachenjera vanobata nevana vavo nokuzvininipisa uye nounyoro
5 Mambo Dhavhidhi akaimba kuna Jehovha achiti: ‘Makandipawo nhovo yokuponesa kwenyu; ruoko rwenyu rworudyi rwakanditsigira, uye kuzvininipisa kwenyu kwakandiita mukuru.’ (Pisarema 18:35) Naizvozvo, Jehovha akazvideredza kuitira kuti abate nomunhu asina kukwana uyu, achimudzivirira nokumutsigira zuva nezuva. Dhavhidhi akaziva kuti kana aizowana ruponeso—uye kunyange pakupedzisira, kuwana ukuru hwakati kuti samambo—zvaizongova bedzi nemhaka yokuda kuzvininipisa kwaJehovha nenzira iyi. Chaizvo, ndiani wedu aizova netariro yoruponeso kudai Jehovha akanga asingazvininipisi, asingadi kuzvideredza kuti abate nesu saBaba vane unyoro uye vane rudo?
6, 7. (a) Nei Bhaibheri risingambotauri nezvaJehovha richiti ane mwero? (b) Unyoro nouchenjeri zvinowirirana sei, uye ndiani anogadza muenzaniso wakanakisisa munhau iyi?
6 Zvinokosha kucherechedza kuti pane musiyano pakati pokuzvininipisa nokuva nomwero. Kuva nomwero kwakanaka kwazvo kuti vanhu vakatendeka vave nakwo. Kufanana nokuzvininipisa, kwakabatana nouchenjeri. Somuenzaniso, Zvirevo 11:2 inoti: “Uchenjeri huri kune [“vane mwero,” NW].” Zvisinei Bhaibheri harimbotauri nezvaJehovha richiti ane mwero. Nemhaka yei? Kuva nomwero semashandisirwo akunoitwa muMagwaro, kunoreva kunyatsoziva kwomunhu paanofanira kugumira. Wemasimba Ose haana miganhu kunze kweyaanozviisira oga nemhaka yemitemo yake yakarurama. (Mako 10:27; Tito 1:2) Uyezve, soWokumusorosoro, hapana waari pasi pake. Naizvozvo pfungwa yokuva nomwero haishandi kuna Jehovha.
7 Zvisinei, Jehovha anozvininipisa uye munyoro. Anodzidzisa vashumiri vake kuti unyoro hunokosha nokuda kwouchenjeri hwechokwadi. Shoko rake rinotaura nezvo“unyoro hwouchenjeri.” * (Jakobho 3:13) Funga nezvomuenzaniso waJehovha panhau iyi.
Jehovha Anotuma uye Anoteerera Nokuzvininipisa
8-10. (a) Nei zvichishamisa kuti Jehovha anoratidza kuda kupa vamwe basa uye kuvateerera? (b) Wemasimba Ose akabata sei nengirozi dzake nokuzvininipisa?
8 Pane uchapupu hunobaya mwoyo hwokuzvininipisa kwaJehovha hunoratidzwa nokuda kwake kutuma vamwe basa uye kuteerera. Iko kungoteerera kwaanoita chinhu chinoshamisa; Jehovha haadi kubatsirwa nemazano. (Isaya 40:13, 14; VaRoma 11:34, 35) Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinotiratidza ratiratidzazve kuti Jehovha anozvideredza munzira idzi.
9 Somuenzaniso, funga nezvechiitiko chinoshamisa chomuupenyu hwaAbrahamu. Abrahamu akashanyirwa nevaeni vatatu, akadana mumwe wavo kuti “Jehovha.” Vaeni vacho chaizvo vaiva ngirozi, asi imwe yadzo yakauya nezita raJehovha uye yakanga ichiita zvayakaita muzita Rake. Apo ngirozi iyoyo yakataura uye yakaita zvayakaita, chaizvo, aiva Jehovha aitaura nokuita chiito. Nenzira iyi Jehovha akaudza Abrahamu kuti Iye akanga anzwa “kudanidzira kweSodhoma neGomora kukuru kwazvo.” Jehovha akati: “Ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvavaita, kana zvakafanana nokudanidzira kwavo kwakasvika kwandiri; kana zvisina kudaro, ndichazviziva.” (Genesi 18:3, 20, 21) Chokwadi, shoko raJehovha rakanga risingarevi kuti Wemasimba Ose aizo“buruka” ari munhu. Asi, akatumira ngirozi zvakare kuti dzimumiririre. (Genesi 19:1) Nei? Jehovha anoona zvose akanga asingagoni ku“ziva” mamiriro chaiwo enzvimbo yacho oga here? Chokwadi aigona. Asi pane kudaro, Jehovha nokuzvininipisa akapa ngirozi idzodzo basa rokunoongorora mamiriro ezvinhu nokushanyira Roti nemhuri yake muSodhomu.
10 Uyezve, Jehovha anoteerera. Akambokumbira ngirozi dzake kuti dzitaure nzira dzakasiyana-siyana dzokuparadza Mambo Ahabhi akanga akaipa. Jehovha akanga asingadi kubatsirwa kwakadaro. Asi akabvuma zvakataurwa neimwe ngirozi ndokuigadza kuti iite zvayakanga yataura. (1 Madzimambo 22:19-22) Ikoko kwakanga kusiri kuzvininipisa here?
11, 12. Abrahamu akasvika sei pakuona kuzvininipisa kwaJehovha?
11 Jehovha anotoda kunyange kuteerera vanhu vasina kukwana vanoda kutaura zvinovanetsa. Somuenzaniso, apo Jehovha akatanga kuudza Abrahamu nezvechinangwa Chake chokuparadza Sodhomu neGomora, murume akatendeka iyeye zvakamuvhiringidza. “Ngazvive kure nemi,” Abrahamu akadaro, achiwedzera kuti: “Mutongi wenyika yose haangaiti zvakarurama here?” Akabvunza Jehovha kana aizorega kuparadza maguta acho kudai varume vakarurama 50 vaizowanikwa imomo. Jehovha akamupikira kuti aizodaro. Asi Abrahamu akabvunza zvekare, achideredza nhamba yacho kusvika kuna 45, kuna 40, zvichingodaro. Pasinei nokupikira kwaJehovha, Abrahamu akaramba achingobvunza kusvika nhamba yacho yaderera kusvika kugumi. Pamwe Abrahamu akanga asati asvika pakunzwisisa zvizere kuti Jehovha ane ngoni zvakadini. Pasinei nezvaakaitira izvozvo, Jehovha nokushivirira uye nokuzvininipisa akabvumira shamwari yake nomushumiri wake Abrahamu kuratidza kushushikana kwake munzira iyi.—Genesi 18:23-33.
12 Vanhu vangani vakangwara uye vakadzidza vaizoteerera nokushivirira zvakadaro munhu ane mano akaderera? * Ikoko ndiko kuzvininipisa kwaMwari wedu. Mukutaurirana kumwe chete ikoko, Abrahamu akasvikawo pakuona kuti Jehovha “unononoka kutsamwa.” (Eksodho 34:6) Pamwe achiona kuti akanga asina kodzero yokubvunza zvinoitwa noWokumusorosoro, Abrahamu kaviri akateterera kuti: “Jehovha ngaarege hake kunditsamwira.” (Genesi 18:30, 32) Chokwadi Jehovha haana. Zvechokwadi ane “unyoro hwouchenjeri.”
13. Shoko rokuti “kunzwisisa” rinorevei sokushandiswa kwarinoitwa muBhaibheri, uye nei shoko iri richirondedzera Jehovha nomazvo?
13 Kuzvininipisa kwaJehovha kunoratidzwa nechimwe chinhu chakanaka kwazvo—kunzwisisa. Zvinosiririsa kuti vanhu vasina kukwana havaratidzi kunzwisisa uku. Jehovha haangodi kuteerera zvisikwa zvake zvakangwara bedzi asi anobvumirawo zvimwe kana pasina chinorwisana nenheyo dzakarurama. Sokushandiswa kwarakaitwa muBhaibheri, shoko rokuti “kunzwisisa” chaizvo rinoreva “kuzvirereka.” Naikwowo kunoratidza uchenjeri hwaMwari. Jakobho 3:17 inoti: “Uchenjeri hunobva kumusoro . . . hunonzwisisa.” Mupfungwai umo Jehovha ane uchenjeri hwose anoratidza kunzwisisa? Chokutanga, anogona kuchinja. Yeuka kuti, zita rake chairo rinotidzidzisa kuti Jehovha anozviita kuti ave chero chinenge chichidiwa kuti azadzike zvinangwa zvake. (Eksodho 3:14) Izvozvo hazviratidzi pfungwa yokuva anochinjika, nokunzwisisa here?
14, 15. Ngoro yaJehovha yokudenga yakaratidzwa Ezekieri inotidzidzisei nezvesangano raJehovha rokudenga, uye rakasiyana sei nemasangano enyika?
14 Pane ndima yeBhaibheri inoshamisa inotibatsira kutanga kunzwisisa kuchinjika kwaJehovha. Muprofita Ezekieri akaratidzwa sangano raJehovha rokudenga rezvisikwa zvomudzimu. Akaona ngoro youkuru hunoshamisa, “motokari” yaJehovha pachake yaanogara achidzora Iye. Chainyanya kunakidza yakanga iri nzira yayaifamba nayo. Mavhiri makuru akanga ane mativi mana uye azere nemaziso zvokuti aigona kuona kwose kwose uye aigona kuchinja kwaaienda pakarepo, pasina kumbomira kana kuti kukona. Uye ngoro huru iyi yaisaita zvokunanaira semotokari huru inogadzirwa nevanhu. Yaigona kumhanya semheni, ichitokona pamharadzano dzenzira! (Ezekieri 1:1, 14-28) Hungu, sangano raJehovha, kufanana naChangamire wemasimba ose anoridzora, rinochinjika zvikuru, rinonzwa mamiriro ezvinhu anogara achichinja nezvinodiwa zvarinofanira kutarisira.
15 Vanhu vangangoedza kutevedzera kuchinjika kwakakwana kwakadaro. Zvisinei, kazhinji, vanhu nemasangano avo vanoti chandagwinyira pane kuva vanochinjika, vanowanzosanzwisisa pane kuzvirereka. Kungopa somuenzaniso: Ngarava huru kana kuti chitima chokutakura zvinhu chingava nesimba noukuru hunoshamisa. Asi pane chinogona here kuchinja kamwe kamwe mumamiriro ezvinhu? Kana chimwe chinhu chikawira munjanji yechitima chokutakura zvinhu, hazvitombobviri kuti chikone. Kumira pakarepo hakusi nyore. Chitima chikuru chinotakura zvinhu chingatora anoda kusvika makiromita maviri kuti chimire pashure pokunge chatsikwa mabhureki! Ndizvowo nengarava huru iyo inogona kuramba ichienda kumahombekombe kwemakiromita masere pashure pokunge injini dzadzimwa. Kunyange kana injini ikaiswa munhendeshure, ngarava yacho inogona kumboramba ichienda kweanenge makiromita matatu! Zvakangofanana nemasangano evanhu ayo anongoti chandagwinyira ndichocho uye asinganzwisisi. Nemhaka yokudada, vanhu vanowanzoramba kuchinjira kumamiriro ezvinhu anomuka. Kusachinjika kwakadaro kwakabhurokesa mamwe masangano uye kunyange kuwisa hurumende. (Zvirevo 16:18) Tinofara sei kuti Jehovha kana sangano rake harina kudaro!
Nzira Iyo Jehovha Anoratidza Nayo Kunzwisisa
16. Jehovha akaratidza sei kunzwisisa mukubata naRoti asati aparadza Sodhomu neGomora?
16 Funga zvekare nezvokuparadzwa kweSodhomu neGomora. Roti nemhuri yake vakagamuchira mirayiridzo yakajeka kubva kungirozi yaJehovha ichiti: “Tizira kugomo.” Zvisinei, izvi hazvina kufadza Roti. ‘Kwete Jehovha!’ akateterera kudaro. Ane chokwadi chokuti aizofa kudai aizotizira kumakomo acho, Roti akateterera kuti iye nemhuri yake vabvumirwe kutizira kuguta raiva pedyo reZoari. Yeuka, Jehovha aida kuparadza guta iroro. Uyezve, kutya kwaRoti kwakanga kusina zvikonzero chaizvo. Chokwadi Jehovha aigona kuponesa Roti ari mumakomo iwayo! Kunyange zvakadaro, Jehovha akateerera kuteterera kwaRoti ndokurega kuparadza Zoari. “Tarira ndakunzwira tsitsi pachinhu ichiwo,” ngirozi yakaudza Roti kudaro. (Genesi 19:17-22) Ikoko kwanga kusiri kuratidza kunzwisisa kwaJehovha here?
17, 18. Mukubata nevanhu veNinivhi, Jehovha akaratidza sei kuti anonzwisisa?
17 Jehovha anoonawo kutendeuka kwomwoyo wose, nguva dzose achiita zvine tsitsi nezvakarurama. Funga zvakaitika apo muprofita Jona akatumwa kuguta rakaipa raiva nechisimba reNinivhi. Apo Jona akafamba nomumigwagwa yeNinivhi, shoko rakafuridzirwa raaizivisa raiva nyore zvikuru: Guta guru iri raizoparadzwa mumazuva 40. Zvisinei, mamiriro ezvinhu akachinja kamwe kamwe. Vanhu veNinivhi vakapfidza!—Jona, chitsauko 3.
18 Zvinodzidzisa chimwe chinhu kuenzanisa maitiro akaita Jehovha nemaitiro akaita Jona paakaona zvinhu zvamira seizvi. Pachiitiko chino, Jehovha akachinja, achizviita kuti ave Mukanganwiri wezvivi pane kuva “munhu wokurwa.” * (Eksodho 15:3) Jona, kune rimwe divi akanga asingachinjiki uye asina tsitsi. Pane kuti aratidze kunzwisisa kwaJehovha, akaita sechitima chokutakura zvinhu kana kuti ngarava yambotaurwa nezvayo. Akanga azivisa nezvokuparadzwa, saka kwaifanira kutova kuparadzwa! Zvisinei, nokushivirira, Jehovha akadzidzisa muprofita wake akanga asingashiviriri chidzidzo chisingakanganwiki chokuratidza kunzwisisa nengoni.—Jona chitsauko 4.
Jehovha anonzwisisa uye anoziva zvatisingagoni kuita
19. (a) Nei tichigona kuva nechokwadi chokuti Jehovha anonzwisisa pane zvaanotarisira kwatiri? (b) Zvirevo 19:17 inoratidza sei kuti Jehovha ndiTenzi “vakanaka nevanonzwisisa” uyewo anozvininipisa zvikuru?
19 Pakupedzisira, Jehovha anonzwisisa pane zvaanotarisira kwatiri. Mambo Dhavhidhi akati: “Nokuti iye unoziva chatakaitwa nacho, unorangarira kuti tiri guruva.” (Pisarema 103:14) Jehovha anonzwisisa zvatisingagoni nokusakwana kwedu kupfuura zvatinoita isu. Haambotitarisiri zvinopfuura zvatinogona kuita. Bhaibheri rinosiyanisa vanatenzi vevanhu ivavo “vakanaka nevanonzwisisa” nevaya “vakaoma kufadza.” (1 Petro 2:18) Jehovha ndiTenzi worudzii? Cherechedza zvinotaura Zvirevo 19:17 iyo inoti: “Unonzwira varombo tsitsi, unoposana naJehovha.” Sezviri pachena, tenzi akanaka uye anonzwisisa bedzi ndiye aizocherechedza chiito chose chomutsa chinoitirwa varombo. Kupfuura ipapo, rugwaro urwu runoratidza kuti Musiki wezvinhu zvose, anozviona seane chikwereti kuvanhuwo zvavo vanoita zviito zvakadaro zvengoni! Pano ndipo pane kuzvininipisa kwakakwirira zvikuru.
20. Ivimbisoi iripo yokuti Jehovha anonzwa minyengetero yedu uye anoipindura?
20 Jehovha anongova nounyoro ihwohwo uye kunzwisisa mukubata kwake nevashumiri vake nhasi. Patinonyengetera nokutenda, anoteerera. Uye kunyange zvazvo asingatumiri ngirozi senhume kuzotaura nesu, hatifaniri kuguma tafunga kuti minyengetero yedu haaipinduri. Yeuka kuti apo Muapostora Pauro akakurudzira hama dzake ‘kuramba vachinyengeterera,’ kuti agosunungurwa mujeri, akawedzera kuti: “kuti ndidzorerwe kwamuri nokukurumidza.” (VaHebheru 13:18, 19) Naizvozvo minyengetero yedu ingaita kuti Jehovha aite zvaaisazoita!—Jakobho 5:16.
21. Chii chatisingambofaniri kuguma tataura pamusoro pokuzvininipisa kwaJehovha, asi, pane kudaro, chii chatinofanira kuonga nezvake?
21 Chokwadi hapana nokumwe kwokuratidzwa kwokuzvininipisa kwaJehovha—unyoro hwake, kuda kwake kuteerera, kushivirira kwake, kunzwisisa kwake—kunoratidza kuti Jehovha anochinja panheyo dzake dzakarurama. Vafundisi vechiKristudhomu vangafunga kuti vari kuratidza kunzwisisa pavanofadza nzeve dzemapoka avo nokupomhodza mitemo yaJehovha yetsika. (2 Timoti 4:3) Asi muitiro wevanhu wokubvumirana pane zvisina kufanira nokuda bedzi kwokugamuchirwa hauna ukama nokunzwisisa kwaMwari. Jehovha mutsvene; haazombosvibisi mitemo yake yakarurama. (Revhitiko 11:44) Saka, ngatide kunzwisisa kwaJehovha nokuda kwezvakuri—uchapupu hwokuzvininipisa kwake. Hazvikufadzi here kufunga kuti Jehovha Mwari, Munhu akachenjera kupfuura zvose, anewo kuzvininipisa kukuru? Zvinofadza sei kuswedera pedyo naMwari anoshamisa asi ari munyoro, achishivirira uye anonzwisisa!
^ ndima 3 Vanyori vekare, kana kuti vaSopherim, vakachinja ndima iyi kuti iti Jeremia, kwete Jehovha, ndiye ari kukotama. Sezviri pachena vakafunga kuti hazvina kukodzera kuti Mwari akaita chiito chokuzvininipisa kudaro. Somugumisiro shanduro dzakawanda dzinorasa pfungwa yendima yakanaka iyi. Zvisinei, The New English Bible rinotaura zvakarurama Jeremia achiti kuna Mwari: “Yeukai, Haiwa yeukai, mokotamira kwandiri.”
^ ndima 7 Dzimwe shanduro dzinoti “kuzvininipisa kunobva muuchenjeri” uye “kuti unyoro huri chiratidzo chouchenjeri.”
^ ndima 12 Sezvineiwo, Bhaibheri rinosiyanisa kushivirira nokuzvikudza. (Muparidzi 7:8) Kushivirira kwaJehovha kunoratidza humwe uchapupu hwokuzvininipisa kwake.—2 Petro 3:9.
^ ndima 18 Pana Pisarema 86:5, Jehovha anonzi “makanaka uye munofarira kukanganwira.” Pisarema iroro parakashandurirwa muchiGiriki, mashoko okuti “munofarira kukanganwira” akanzi e·pi·ei·kesʹ, kana kuti “kunzwisisa.”
Eksodho 32:9-14 Jehovha akaratidza sei kuzvininipisa mukupindura kuteterera kwaMosesi akamirira vaIsraeri?
Vatongi 6:36-40 Jehovha akaratidza sei kushivirira nokunzwisisa mukupindura zvaikumbirwa naGidhiyoni?
Pisarema 113:1-9 Jehovha anoratidza sei kuzvininipisa mukubata nevanhu?
Ruka 1:46-55 Mariya aidavira kuti Jehovha anoona sei vanhu vanozvininipisa uye varombo? Maonero aJehovha angatiita kuti tinzwe sei?